SAWIRRO: Madaxweyne Deni oo caawa la kulmay Dhooba-daareed, kaddib ridistii 2019kii – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Madaxweyne Deni oo caawa la kulmay Dhooba-daareed, kaddib ridistii 2019kii
May 10, 2022 Xuseen 14
Madaxweynaha Puntland, ahna Musharrax Madaxweynaha DFS Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa caawa kulan la qaatay Guddoomiyihii hore ee Golaha Wakiillada Dowladda Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhooba-daareed, kaas oo lagu riday mooshin uu Siciid Deni soo abaabulay.
Kulanka oo ka dhacay hoyga uu Muqdisho ka degay yahay Siciid Cabdullaahi Deni ayaa looga hadlay xaalada dalka gaar ahaan arrimaha doorashada Madaxweynaha.
“Waxaa caawa booqasho noogu yimi Guddoomiyihii hore ee Golaha Wakiillada Dowladda Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhooba-daareed, waxaan iska wareysanay guud ahaan xaaladda dalka. waxaan uga mahadcelinaya kulanka iyo wakhtiga aan wada qaadanay.”
Dhooba-daareed oo bishii November lagu riday mooshin dhiig ku daatay ayaa saldhig ka dhigtay dalka Turkiga. Waxaana uu dhaliilo joogto ah u jeedin jiray Madaxweyne Deni. Balse heshiis hoose oo dhexmaray labada Nin ayaa soo afmeeray mucaaradnimadaas.
Waxaa ah arrin aad u naxdin badan in kuwa meelahan isku afxumeynaya ay badankoodu yihiin aabbeyaal iyo awooweyaal qurbaha kunool.
Bal maxay dhashooda dhaxalsiinayaan oo akhlaaq, qiyam, dal, iyo mustaqbalba ah?
Miyayse marna kafikireen inay xisaab adagi Qiyaamaha kusugayso oo halaagga ay jiilashooda dhaxalsiiyeen loo qabsan doono?
Carruurta ay waalidiinta uyihiinse, maxay ka dareemi lahaayeen haddii latusi lahaa oo loofasiri lahaa qoraallada fuxshiga ah ee ay aabbayaashood iyo awooweyaashood bogaggan habeen iyo dharaar soodhigaan?
Musharax burka oo la kulmay Dhoobo Daareed kk
Waadigii maryaha dhigtay markii Siciid Deni Dhooba-daareed
xabada futada kala dhacay hadana waa kuwaa saylada
cod iibsiga ku heshiiyayXamar ku heshiiyay.
Cashuurta Dekada Boosaaso ee aa ku hadaaqi jirtay
Dhooba-daareed caawa markale ayaa jeebka loogu shubay.
Dadkii lagaa dilayna mag ma leh! Eesh qiyaasak???
Laalays orod dabada dado iidoor daba cayuun maxaa adiga kaa galay OO ku dhex galiyey orod saqraan land tii aad ka timid aad OO ka hadal muuse biixi iyo ciro Waa kuwa xabada isu haystee
Allah kariim Beesha WARSANGELI bahdilnimadaan lala bartay waa maxay? Muxuu uga baahan yahay Puntland , Dhooba-daareed miyaanu ahayn Somalilander? waa ino dhisaa oo horumariya tuuladiisa Bahan inta uu daba ordayo majeerten ? This is a lesson for everyone who denies his country
@Sitaha “Yoocada” aka “Laalays”,
Meel uu Dani canshuurta Puntland Dhoobodaareed “jeebka ugu shuubay” adigu goobjoog iyo marag midna kama aad ahayn e nabka iyo namiimnimada tolkan kala dhex bax.
Dhoobodaareedna canshuurta tolkiisa Puntland baahi ka haysa ayaan jirin sideedaba waayo isaga ayaaba Ilaahay (SWT) milyandheer kayeelay oo Puntland wax badan kusoo kordhiya. Turkiga oo keliya ayuu shaqaale baan oo Soomaali iyo Turki isugujira mushahar kusiiyaa, noocaaga aan isaga kabacaseeyenimo xataa ugu qalmin af aad wax kaga sheegto kugu mayaallo sidaadaba.
Dhibtii Dani iyo Dhoobodaareed kala gaadhayna waa mid labadooda iyo tolka ay kadhasheen utaalla e adiga waxba kaaga ma shan iyo toban aha. Isqornimada jooji oo waxa adiga ku khuseeya kahadal maandhe.
Bipolariskii ayaa kugu kacay sow maaha? Kkkkk
Shaleytoole munaafaq, maanta muumin kkkkk. Beritoole munaafaq, saadanbe muumin, saakuuna munaafaq kkkkk.
Walee qof aan garanayaa ma daahiro. Kolkii horeba Warsangelinimadii kolkey ku anfici weydey ayaad Rinji Majeerteen is marisay ood MJ is moody. Kkkkkk
Imikana Dhoobo Daareed oo Turkiga self exile u joogey ayaa kolkuu Roodhidii adkeyd ee bilaa dhadhanka aheyd kasoo daaley, arkeyna in Deni Somalia Madaxweyne ka noqon karo oonu kaga nabad geli doonin ayuu isagoo seynta dabada iyo lugaha uga jirto iskeeney. Ma choice kale ayuu heystaa? Kkkk
Tollow weynu ognahay oo Deni wax a ma cafiyee ma kabihiisuu dhunko ku yidhi? Mise ii niiki oo ii mashxarad buu ku yidhi, mise Rinji MJ ayuu yidhi isku dhamuuq? Kkkkkk
Walaahi beesha WARSANGELI bahdilnimadaan lala bartay waa soo baxday inay ayagu dhabarkeed lee yihiin. Mar umbaa laga xaal marindoonaa. Laakiin hadii ay ogoladaan si billaa ixtiraam xilalka looga hadana dil loogu daro dibna loo fiirin hadhoow ayagoo madluun oo madaxa dhiganaya ay yimaadaan waligood macne iyo ixtraam yeelan maayaan. NASIIBDARO
Marka hore,ujeedadaada maan garan,waxay ilatahay,in wax ra’yi kuu gaar ah ayaad an hayn.
Intaasi ha dib,mudane Cabdixakiim ( Dhoobo daareed )
ma ahayn in uu wax heshiis ah ana kulan ah m,ka yeesho,
Siciid Deni,oo iminka xaalkiisa siyaasadeed iyo maamul ba,oo meeshii ugo liidatay uu maray.
Deni oo Puntland iyo Soomaaliya ba aan wax kalsooni ah ku haysan,marka laga reebo,kuwa ay xulufada yihiin,oo ay ku bahooveen boobka hantida shacabka Puntland.
Gunaanadkii Cabdixakiin,waxay in aadan marna la heshiin shaqsigii ja danbeeyey,weerarkii Baarlamaan ka Puntland iyo in xilka uu si xoog ah kaaga qaado,taasi waxay,dadka tusaysaa in aadan lahayn mabda’ adag iyo
in aad is- dhiibtay.
Deni iyo Kooxda,maafiyada ah ee Aaran ku biir.
Deni shaki kuma jiro in isaga oo guuldaraystay in uu Garowe iman.
Waxaa ayaan dara in shacabka Puntland,ay awoodi waayeen in ay ,casilaan Deni si Puntland loo sabatabixiyo.
Jamac mohad says:
Ina hoyo xun adeer warsangalin waa walalkayo qadatin iyo xushmaf buu agtayada kaleeyahay adaa fadlankushubo ah ee kadaa afkada huradaleh anigu kama marmo warsangari ilahy hortiis lkn adi waan Kaa marmaa orada gabdhahafa kacesho isaaq ufdheh
Siyasadda ayaan weji lahayn colna ma aha nabadna ma aha markaa ha ku habsaaminina idinku
IIDOOR DABA CAYUUN 30 SANO AYAY BEEN KU NOOLAAYEEN.
HADDA WAXAA KA SOO HARTAY MUNAAFAQAD IYO IN AY DHEX QARAABTAAN RAG WADA DHASHAY.
IIDOOROOW AAWAY AQOONSIGII?
IIDOOROOW AAWAY ABAARSO?
AAWAY XILDHIBAANADII INGRIISKA EE LAGU XAMANAAYAY DHAQANKA AQOONSI MA KEENI WAAYEEN??
DAAROOD ISMAACIIL VIVA
KABLALAX DAAROOD VIVA
si loo aamino dhoobo daarood oo kulan kan u soortaa galo, waa in uu si cad u sheegaa inaanu shirka Sanaag ka dhcayo aanu qayb ka ahayn kana warqabin lagana tashan laguna shirqoolayo Puntland, waanu sameeyey oo TV yada ka sheegay. Deni wuu ka aqbalay inuu si mawaadin caadi ah Garoowe u imaan karo. sidoo kale waxuu macluumaad ka siiyey arimaha oo Karaash faraha kula jiro iyo cida dhameelka siisa.
Doqon waxay jeclaataa ciddii dhirbaaxda
Waa ninkaynu ogeyn sida loo galay oo Deni u dawarsi tegay!!!
Isagaa noo yimi.
Lacag iyo sharaf???
Deni ku sii dhawow ha kugu celiyo Puntland!!!